अध्यक्षमा घनश्याम भुसाल र केपी ओलीको भि'ड'न्त हुने, कसले मार्ला बाजी ?
अध्यक्षमा घनश्याम भुसाल र केपी ओलीको भि’ड’न्त हुने, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौ ।नेकपा (एमाले)मा वैचारिक नेताका रुपमा छवि बनाएका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीको मूल नेतृत्वको रुपमा आफूलाई उभ्याउने संकेत गरेका छन् । अर्थात, पार्टीको १०औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदको दावी गर्दैछन् ।
अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने विषयमा भुसालले भने– ‘हाम्रो पार्टीको विधानमै स्पष्ट व्यवस्था छ । केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी भइसकेको व्यक्ति अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न सक्छ ।
१०औं महाधिवेशनमा सोही अनुसार हुन्छ । अरु कमरेडहरु जस्तै म पनि सबै कोणबाट पार्टीको मूल नेतृत्वका लागि योग्य छु ।’ अर्थात भुसाले ‘अध्यक्षका लागि म पनि तयार छु’ भन्न खोजेका हुन् ।
आजै आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष ओली अध्यक्षमा उम्मेदवार भएको अवस्था बाहेक आफूले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् ।